Shirkii G8 oo soo afjarmay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fredrik Reinfeldt oo rajo ka muujiyey G8 Foto: Henrik Montgomery / Scanpix
G8 beslutar om matstöd till fattiga
Shirkii G8 oo soo afjarmay
La daabacay fredag 10 juli 2009 kl 15.30
Wadamadda xagga soo saarka ku horumaray ee la yiraahdo G8 ee shirkoodii uga socday dalka Talyaaniga ayaa soo gabogaboobay, iyadoona halkaasi ka soo baxeen go'aano iyo isfarad wax ku ool ahi. Shirkan ayaa qodobaddii ugu mihiimsanaa ee la isku raacay wuxuu ahaa in dalalka soo korayo la siiyo deeq dhaqaale adduun gaaraya 160 milyaardi oo lacagta wadankan ah.
Wadamadda xagga soo saarka ku horumaray ee la yiraahdo G8 ee shirkoodii uga socday tuuladda L’AQUILA ee dalka Talyaaniga ayaa soo gabogaboobay, iyadoona halkaasi ka soo baxeen go'aano iyo isfarad wax ku ool ah. Shirkan ayaa qodobaddii ugu mihiimsanaa ee la isku raacay waxuu ahaa in dalalka soo korayo siiyo deeq dhaqaale adduun gaaraya 160 milyaardi oo lacagta wadankan ah taasoo taakuleyn u ah xagga wax soo saarka dalalkaasi soo koraya.
Tuuladda la yiraahdo L’AQUILA ee ku taala dalka Talyaaniga ayaa hogaamiyaasha dalalka horumaray ee la yiraahdo G8 iyo sagaal iyo tobban wadan oo iyagana ka qeyb qaadanayayey kulaansi iskugu tagay tuuladaasi waxaana looga hadlay arrimo badan oo ay kamid yihiin siddii loo taakuleyn lahaa deeqda dhaqaale ee la siinayo qaaradda Afrika iyo dalalka soo koraya ee dunidda sadexaad. Arrimaha kale ee halkaasi looga hadlay ayaa kamid ah isbadalka xagga cimilada iyo kuleylka ku soo kordhaya kownkan anynu ku noolnahay, iyadoo xubnaha ka ah dalalka kulankaasi ka qeyb qadanayey ay isku raaceen in wax laga badallo qaaca hawada ku baxayo la yareeyo oo ay ahaato 2 garaado oo ah halbeega lugu cabiro heerkulka. Shiinaha iyo Hindiya ayaa arrintaasi soo dhaweeyey, walow dalalka adduunyada ee la aaminsan yahay 80% iney qeyb ku leeyihiin isbadalka kuleylka ah ee cimiladda loogu baaqay iney joojiyaan.